Dowladda oo lagu eedeeyay inay qeyb ka tahay dhibaateynta Saxafiyiinta Shaaficiyah.com � Arts-Osmanart
Dowladda oo lagu eedeeyay inay qeyb ka tahay dhibaateynta Saxafiyiinta Ururka Saxafiyiinta Qaranka ee Nusoj ayaa ku eedeeyay dowladda inay qeyb ka tahay dhibaateynta Wariyaasha magaalada Muqdisho.
Iyadoo kooxo hubaysan ay shalay ku dhaawaceen Wariye C/qaadir Cumar Cabdulle Kuwaarel oo ka tirsan TV-ga Universal Xafiiskiisa Muqdisho ayaa Ururka Saxafayiinta Nusoj waxa uu ku eedeeyay dowladda in ay qeyb ka tahay dhibaateynta Wariyaasha Muqdisho.
C/rashiid Abuukar Deel oo ka mid ah Masuuliyiinta Ururka ayaa waxa uu sheegay in dowladda KMG Soomaaliya ay sii deysay dad badan oo loo qabtay dilalkii Wariyaasha sida Xasan Fantastic iyo Xiis, iyadoo aan wax la iska weydiin dambigooda taasina ay xadgudub ku tahay Saxaafadda.
Wariye Axmed Nuur oo Tv-ga Universal ay iska shaqeeyaan Wariye C/qaadir Kuwaarel ayaa waxa uu sheegay in uu ka xun yahay dhaawaca loo gaystay saxiibkiisa ay isla shaqeynayaan oo uu sheegay in uu rajeynayo caafimaad isaga oo dhaleeceeyay kooxihii ka dambeeyay dhaawaca Wariyaha.
Ku dhawaad 10 Wariyayaal ayaa sanadkaani gudihiisa dil iyo dhaawac loogu gaystay Soomaaliya haba ugu badanaato magaalada Muqdisho kuwaasi oo aan la ogeyn cida ka dambeysa cida wax ka qabteyna aysan jirin.